एमाले पाङग्राङ गाबिसको अध्यक्षमा कुवँर निर्विरोध निर्वाचित ! – ebaglung.com
२०७३ फाल्गुन ३, मंगलवार १७:१५	Top News, थप समाचार
माधब पराजुली, पर्वत २०७३ फागुन ३ । नेकपा एमाले पाङग्राङ गाबिसको अध्यक्षमा चन्द्रबहादुर कुवँर सर्वसम्मत चयन भएका छन् ।
राष्टिय« एकता,समृद्धि र स्वाभिमान संबिधान कार्यान्वयनका लागी एमालेको अभियान भन्ने मुल नाराका साथ सोमबार भएको छैठौ गाउँ अधिवेशनबाट कुवर अध्यक्षमा चयन भएका हुन् । जसको उपाध्यक्षमा लोक बा.कुवँर,सचिबमा रुद्र बहादुर थापा उपसचिबमा लोक बहादुर नेपाली ललीत चयन भएका छन् । सदस्यहरुमा विष्णु प्रसाद कडेल,यमकली पाण्डे,कर्म बा.नेपाली,बाबुराम भुषाल,वेद प्रसाद भुषाल,देव बा. नेपाली,निर्मला कुवँर उत्तम कुवँर,गणेश पाण्डे लगाएत छन् ।
कार्यक्रममा सांसद लम्सालले वर्तमान सरकारलाई बिग्रिएको बससंग तुलना गर्दै यात्रुको मात्र हैन बसको समेत भबिष्य अन्धकार भएको बताए । उनले यो सरकारका कारण नेपाल र नेपाली जनताको भबिष्य अन्धकार भएको उल्लेख गर्दै एमालेको सरकारले केहीँ बर्ष नेतृत्व मात्र गर्नेहो भने देश चमत्कारमय बन्ने बताए ।
त्यस्तै नेकपा एमाले जिल्लाा कमिटि उपाध्यक्ष भक्त कुवँरले एमाले पार्टी आफ्नो स्वार्थ केन्द्रीत नभई जनताको सेवामा निरन्तर लागीरहेको बताए ।
कार्यक्रममा नेकपा एमाले जिल्ला कमिटि सचिब पदम पाणी शर्मा,उपसचिब गोविन्द पहाडी,एन.आर.एन. रुसका महासचिब रमेश्वर गौतम,नेकपा एमाले धौवलागीरी पुर्व सदस्य देवेन्द्र पाण्डे,डम्मर कुमारी गुरुङ,जिल्ला सदस्यहरु मञ्जु अधिकारी,पर्शुराम सुवेदी,सुरक्षा लामीछाने लगाएतले बोलेका थिए ।
कार्यक्रममा नेपाली काङग्रेस र माओवादी पार्टी परित्याग गरि करिब ३० जान मानिसहरु एमालेमा प्रवेश गरेका थिए ।